Vehivavy Tajik Nolazaina Fa Maty Tao Amin’ny Toby Miaramila Rosiana Ao Tajikistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2015 17:35 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, македонски, English
Ny hanampy ny firenena marefo indrindra any Azia Afovoany no tanjon'ny toby miaramilan'i Rosia any Tajikistan, mba hiaro tena amin'ny fidikidiran'ny Afghanistan izay mifanila aminy. Fa raha manamafy ny fisiany ao amin'ilay repoblika misy mponina 8 tapitrisa i Maosko, ao anatin'ny fihamafisan'ny ady any atsimo, toa ireo miaramila mitam-basy an'ny sampana faha 201 mitoetra any no tena rahona lehibe ho an'ny filaminan'i Tajikistan.
Ny alin'ny 5 Novambra, notaterina fa nisy namono tao amin'ny faritry ny tobin'ny miaramila Rosiana eo ambany fitantanan'i Ivan Sherbakov, lientnà zokiny an'ny sampana faha 201 ilay ramatoa teratany Tajik, Shoira Jabborova. Nandritra ny fanadihadiana savaranonando niarahan'ny Rosiana sy Tajik, nilaza i Sherbakov fa tsy afaka mahatadidy na inona na inona izy satria tena mamo tampona izy tamin'io.
Ny 12 Novambra, nisy loharano mpamatsy vaovao avy tamin'ilay vondrona mpanao fanadihadiana nilaza tamin'ny gazety teo an-toerana Asia Plus fa ny hasarotam-piaro no mety ho anton'ilay herisetra nahafaty nataon'i Sherbakov tamin'i Jabborova, ary fantatry ny sampana fiarovana ao amin'ny toby hoe ‘vadiny’ ihany koa i Jabborova na dia manana vady any Rosia aza i Sherbakov.
Tonga tamin'ny fotoana ratsy ilay zava-nitranga, tao anatin'ny fifandraisana feno fifandiran'ny fiarahamonina Tajik amin'i Rosia, iray volana latsaka taorian'ny nahafatesan'ny zazakely iray vao dimy volana, zanak'ireo Tajik mpiasa mpifindra monina. Nolazaina fa matin'ny hasarotana tamin'ny tratra i Umarali Nazarov, nalain'ireo manam-pahefana tao St-Petersburg teny amin'ireo ray aman-dreniny, izay noahiahiana ho tsy nanaraka ny lalànan'ny fifindràmonina.
Tohin'ny famonoan'ireo miaramila Rosiana tao anatin'ny toby, an'ireo Tajik mpitondra fiarakaretsaka, ny taona 2009 sy 2014 io.
Gulomkul, mpamaky ny masoivoham-baovao Asia Plus, nanoratra hoe:
Mpaneho hevitra antsoina hoe Human, nangataka ny hanaovan'ny fitsaràna eo an-toerana ny raharaha Sherbakov, fa tsy hoe avela hotsarain'ny fitsaràna miaramila Rosiana sahala amin'ireo miaramila namono ireo Tajik mpitondra taxi.
Mitondra amin'ny fifanenjanana eo amin'ireo Tajiks sy ireo Rosiana vitsy an'isa sisa tavela any ilay zava-nitranga, izay tena manohana ny fisian'ny toby ao amin'ny firenena. Nilaza izao ny iray:
Toa tsy azo inoana hoe ho avy ato ho ato aloha izany. Nohalavaina ho 30 taona indray ny fisian'ny tafika Rosiana any Tajikistan, nosoniavin'ireo firenena roa tonta ny taona 2012. Mampiantrano ny Okno, Rafitra Fanarahamaso Ny Habakabaka ary ny Fomba Fiambenana ny Habakabaka Okno ihany koa i Tajikistan. Niambina ny sisntanin'ilay fanjakana ao Azia Afovoany ireo tafika Rosiana nialoha ny nandraisan'ny hery teo an-toerana izany ny taona 2005.